Friday, 23 Aug, 2019 10:23 AM
कमरेड, भर्खरै अमेरिकाको अलास्काका एक व्यक्तिले दाउरा खोज्दै गर्दा ५० वर्ष पुरानो पत्र फेला पारेका छन् । एक रुसी व्यक्तिले लेखेको पत्र उनले रक्सीको बोतलमा राखिएको अवस्थामा भेट्टाएका हुन् । अलास्काका टाइलर आइभनोफले रक्सीको बोतलमा बन्द गरेर राखिएको अवस्थामा रुसी भाषामा लेखिएको पत्र फेला पारे । सो पत्र सन् १९६९ मा लेखिएको खुलेको छ । टाइलरले रुसी भाषामा लेखिएको पत्र भेट्टाएपछि त्यसको अंग्रेजी अनुवादका लागि अपिल गर्दै सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका थिए । अनुवादपछि थाहा भयो कि सो पत्र सन् १९६९ को जुन २० मा रुसी पानी जहाजमा रहेका रुसी समुद्री सैनिकले लेखेका थिए । रुसी सञ्चारमाध्यमले पत्र सम्बन्धी स्टोरी कभर गरे । रुसी सञ्चारमाध्यमले पत्रका लेखक क्याप्टेन एनातोली बोत्सानेन्कोको खोजी गरे । अहिले ८६ वर्षका एनातोलीलाई पत्रका बारेमा बताउँदा उनले आँसु रोक्न सकेनन् । उनले रुसी टेलिभिजन रोसिया वानसँग भनेका छन्, ‘यो मेरो लेखाइ हो ।’ उनले पत्र अपरिचित अर्थात् प्राप्त गर्नेका लागि लेखेका थिए । यो प्रसंगले पनि पत्र लेख्न मलाई साहस दियो । तपाईले आज पढ्न नभेटे पनि कुनै दिन आजको परिस्थिति थाहा हुनेछ ।
कुरा त थुप्रै छन्, बुटबलको महाधिवेशनपछि कमरेड केपी शर्मा ओलीको मर्यादा क्रम यहाँले कहाँ पु¥याउनु भएको थियो ? एक पटक त्यो पनि स्मरण गर्ने हो कि । झापामा युवा संघले कार्यक्रम गरेर त्यो विषयलाई समाधान गर्न दवाव दिएको हामी झापालीले झल्झली सम्झिरहेका छौं । पार्टी अध्यक्ष ओलीले चुनावी सभालाई सम्वोधन गर्दै ताप्लेजुङमा योगेश भट्टराईलाई जिताएर पठाउनु म मन्त्री बनाएर फिर्ता गर्छु भनेको विषय चुनावभर प्रिय बन्यो । चुनावपछि सरकार बन्ने बेला भयो, पार्टी अध्यक्षले नाम माग्दा तपाईंले योगेश होइन, लालबाबु पण्डितको नाम दिएको चर्चा त्यति बेलै सुनेको हो । प्रदेश सरकार बन्ने भयो, ३ नम्वर प्रदेशमा अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई बनाउन केपी ओली बाध्य भइहाल्छन्, १ नम्वरमा चुनाव गरौं भनेर लागेको पनि समाचारहरुमै पढेको हो । भरे १ र ३ दुबैमा यहाँको इच्छा पुरा भएन रे भन्ने चर्चा थियो । यसमा कमरेडको विचार सुन्न पाइएन ।
प्रिय कमरेड, केही कार्यकर्ताले माधव नेपालले गुमाउने केही छैन भनेर लेखेको पनि देखियो । तपाईंलाई त्यत्तिकै उक्साइ रहेको जस्तो मलाई लागेको छ । हिजो लामो समय तपाईं पार्टी प्रमुख हुँदाको पार्टीको अवस्था पनि हामीले हेरेकै हो । तपाईंले प्रधानमन्त्री भएर पनि काम गरेकै हो । तपाईंले पाउन बाँकी नै के रहेको छ र ? गुमाउनु पर्ने ? फेरि पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री तपाई बने पनि हुन्छ नबने पनि हुन्छ । तर, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले अलिक लामो समय सरकार चलाएर रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, रोजगार नभएर भौतारिनु पर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई बढाउने, विकास निर्माणको कामलाई तीब्रता दिने जस्ता काम गरे हुन्थ्यो भन्नेसम्म न हो । त्यसका लागि कामरेड प्रतिबद्ध भएको कुरामा मलाई शंका छैन । तर, तपाईंलाई सिराने हालेर पद पाउन तछाड मछाड गर्नेहरुबाट कमरेड सजग रहने हो कि ?
उही चवन्नी कार्यकर्ता ......